Sararoota kamtu akka mul'atan ifteessa.
Addaan baasaa fuulaa
Agarsiisa argiitiif dirqaalaalee garaagaraa filadhu.
Yaadannnoo dhaabbiin agrsiisuuf, ajaja Yaada mul'isi baafata haallee maadhee irraa filadhu.
Yaadannoo ajaja Saagi - Yaada barreessuu fi gulaaluu dandeessa. Yaadni dhaabbiin mul'atu sanduuqa yaadannoo cuqaasuun gulaalamuu danda'a. Naanna'aa cuqaasiitii galfata Yaada jalatti yaadannoo galmee ammee jala jiran hunda arguu dandeessa. Naanna'aa keessatti yaada lamcuqaasuudhaan, qareen gita maadhee yaada qabatuutti utaala.
Yeroo ajajni kun kaka'e, halluuwwan galmee keessatti ramadaman kamiyyuu amma dalagaan kaka'a ala ta'utti hin mul'atan.
Irra baha barruu
Wabiilee halluun agarsiisi
Waantota garee waantaa hanga sadiitti qaban akka mul'atan yookiin dhokatan qindeessa.
Yoo mirkanaa'e, wardiin hundi faaktoorii guddisuu walfakkaatuun agarsiifamu. Yoo hin mirkanoofne, tokkoon tokkoo wardii guddisuu faaktoorii mataa ofii qabu.
Akka miseensonni gargaarsaa hangi tokko gabatee keessatti mul'atan yookiin dhiisan ifteessa.
Marfata kabala tarree
Marfata kabala sarjoo
Title is: Argi